गत महिना हाम्रो कारखाना मा गएर एक विशेष ग्राहक आउँछ , उहाँले अलेक्जेन्डर रूस आउँछ छ.
उहाँले आउनुअघि हाम्रो VMC850 सीएनसी मशीनिंग केन्द्र आदेश छ. हाम्रो संचार मा हामी धेरै राम्रो कुराकानी , उहाँले हाम्रो मिसिन मन पराएका र हामी उहाँलाई धेरै फोटोहरू र भिडियो पठाएको , राखिएको क्रम पछि.
उहाँले आए त्यो दिन , मेरो मालिक र मेरो अर्को सहयोगी हाम्रो शहर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उहाँलाई छानिएको , त्यसपछि हामी आफ्नो मिसिन हेर्न उत्पादन प्रस्थान गर्न जाने हाम्रो कारखाना गर्न उहाँलाई लगे. साइटमा , उहाँले अत्यधिक हाम्रो कार्यकर्ता व्यावसायिक र हाम्रो सफा उत्पादन लाइन बारेमा speaked . हामी काम उहाँलाई देखाउन बिजुली गर्न मिसिन मार्फत प्राप्त गर्न हाम्रो कार्यकर्ता सोधे, उहाँले आदेश छ Fanuc सिस्टम, उहाँले पनि आफूलाई संचालित र हामी सबै जवाफ गरे धेरै विशिष्ट प्रश्न.
यसबाहेक ,हामीले उहाँलाई हाम्रो प्रशोधन ठूलो मिसिन देखाए, ठूलो सीएनसी gantry मिलिंग मिसिन जस्तै, CNC gantry हामी धेरै उच्च गुणवत्ता मिसिन बाहिर बनाउन हाम्रो ग्राहकहरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न गत वर्ष ताइवान बाट आयात जो पीस मिसिन. अलेक्जेन्डर हाम्रो मालिक संग खुसीसाथ कुरा , तिनीहरूले हाम्रो मिसिन र हाम्रो कारखाना बारेमा विवरण कुराकानी , हामी अलेक्जेन्डर आफै हामीलाई धेरै सन्तुष्ट छ कि देख्न सक्थे.
साँझ हामी सँगै खाने थियो , हामीले उहाँलाई हाम्रो स्थानीय स्वादिष्ट खाना देखाए र अतिथि धेरै खुसीको कुरा खाएको. अलेक्जेन्डर उहाँले एक नजर छ रूस जान हामीलाई स्वागत भनेर हामीलाई भन्नुभयो , उहाँले त्यहाँ हाम्रो मिसिन एजेन्ट हुन चाहन्थे , जो हामी निकट भविष्यमा ALOT सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को:पाकिस्तान ग्राहक Visiting हाम्रो